Rugby – «Top 6 Aroi 2018» : samy vonona handresy an’i La Réunion ny Cosfa sy ny FTM | NewsMada
Rugby – «Top 6 Aroi 2018» : samy vonona handresy an’i La Réunion ny Cosfa sy ny FTM
Par Taratra sur 31/03/2018
Hitana ny sain’ny rehetra, ny andro fahatelo sady farany amin’ny lalao mandroso? hiadiana ny «Top 6 Aroi», taranja rugby. Fihaonana hotanterahina eto Madagasikara, ary handraisana ny ekipan’i La Réunion.
Hotanterahina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, rahampitso alahady 1 avrily ? ny andro fahatelo farany amin’ny lalao mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (Top 6 Aroi), ho an’ny ekipa tompondaka. Lalao roa no hamarana izany, izay handraisan’ny ekipa malagasy ny soloNtenan’i La Réunion.
Hanokatra ny fihaonana, manomboka amin’ny 1 ora tolakandro, ny fifandonan’ny RC ST Paul sy ny Cosfa, ho an’ny vondrona «B». Amin’ny 3 ora kosa ny fikatrohan’ny FTM Manjakaray sy ny Etang-Salé, ho an’ny sokajy «A». Raha tsiahivina, efa samy nahazo fandresena iray avy ireo ekipa efatra ireo.
Hiady izay ho laharana voalohany ao amin’ny vondrona misy azy tsirairay ? araka izany, ireo ekipa efatra ireo. Hiendrika famaranana kely avokoa izany ireo lalao roa ireo. Ekipa tsy mbola fantatry ny soloNtena malagasy saingy efa henony ireo soloNtenan’i La Réunion ireo. Manana mpilalao lehibe, ireo klioba roa avy atsy amin’ny Nosy rahavavy ireo. Araka izany, miainga ao anaty «avant», ny fanafihan’izy ireo.
Vonona ny paikady
Efa nanomana ny fanoherana izany, na ny FTM na ny Miaramilan’ny Cosfa. Na izany aza, nohamafisina ihany koa ny tanjaky ny “trois quart aile”, izay lalao manavanana, ny ekipa Malagasy. Nambaran’ireo mpanazatra mirahalahy fa hialana araka izay azo atao, ny fifampitakosenana, amin’izy ireo. Efa nomena ireo mpilalao koa ny torohevitra tsy hanaovana fahadisoana, amin’ny zavatra tsy misy dikany fa mety hanome tombony ireo mpifanandrina.
Raha ny fandaharam-potoana, ho tonga amin’ity asabotsy ity, ny Reonione. Avy hatrany dia hifandimby hitsapa ny kianjan’i Mahamasina, izy ireo avy eo. Ho tonga amin’ity anio ity koa ireo mpitsara, ka araka ny fantatra, teratany Mahorey no hitantana ny lalaon’ny Cosfa sy ny ST Paul. Frantsay kosa ny an’ny FTM sy ny Etang-Salé.
Vonona ny Cosfa sy ny FTM ary miandry ny mpijery amin’ny fanohanana azy ireo, hibatany ny fandresena.